Wasiirka Dastuurka Oo Jawaab Ka Bixiyay Hadal Ka Soo Yeedhay Faysal Cali Waraabe Oo Uu Ku Sheegay In Aanay Dawladi Jirayn Oo Aanu Muuse Biixi Kursiga Fadhiyayn Haddii Aan Doorasho La Qaban – somalilandtoday.com
Wasiirka Dastuurka Oo Jawaab Ka Bixiyay Hadal Ka Soo Yeedhay Faysal Cali Waraabe Oo Uu Ku Sheegay In Aanay Dawladi Jirayn Oo Aanu Muuse Biixi Kursiga Fadhiyayn Haddii Aan Doorasho La Qaban
(SLT-Hargeysa)-Wasiirka wasaaradda xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe oo sheegay in aanay dawladi jirayn, isla markaana aanu Madaxweyne ahaanay Madaxweyne Muuse.
Waxaanu wasiirku sheegay in xukuumadda xilkeedu imika bilaw yahay oo dhawaan la doortay, xil ka dhammaadayna aanu jirin, laakiin loo baahan yahay in asxaabtu ka wada hadasho wixii doorashooyinka dawladaha hoose iyo wakiiladda la xidhiidha oo ah kuwo hadalkoodu taagnaa xukuumadda madaxweyne Muuse ka hor.
Waxa kale oo uu wasiirku intaa ku daray in xukuumaddu diyaar u tahay in dalka doorashooyinku ay xilligooda ku qabsoomaan laakiin aanay xisbiyada mucaaridku doorasho diyaar u ahayn, waxaanu intaa raaciyay in dalku marayo xilligii uu ugu dimiquraadisanaa oo uu ka soo gudbay shir beeleed iyo reero isu yimaadda oo wax doorta. Isla markaana uu marayo in masiirka dalka in ay dadku ka taliyaan oo ay gacantooda ku doortaan hoggaanka dalkooda. Waxaa kale o uu wasiir Maxamed Xaaji Aadan dardaaran waayeelnimo oo waalidnimo uu faray ardayda ka qalin jebiyay jaamacadda Alfa faraceeda Burco oo uu ka qayb galay munaasibaddii qalinjebintooda oo dorraad lagu qabtay magaalada Burco.
Waxaanu wasiirku uga digay madaxda mucaaridka in ay ka fogaadaan hadalada aan u wanaagsanayn qarannimada iyo jiritaanka Somaliland ee cadawga farxad gelinaya oo ay ka dhawraan dhegaha bulshada ay asxaabta u yihiin hadalada aanay jeclayn ee ay ka maqlaan mar kasta.
Waxaanu intaa raaciyay in dalku dastuur iyo shuruuc leeyahay oo ay awoodaha dalka kala qeexeen isla markaana Muuse Biixi Madaxweyhana qaranka ku yahay dastuurka dalka loona baahan yahay in aan laga bixin xayndaabka
shariga ah ee qaranka u yaalla oo laga wada hadlo oo keliya hawlaha qaran ee innoo wada yaalla sidii loo dhammaystiri lahaa laakiin aan qarannimad la weerarin.